भ्यालेन्टाइन डे- पार्कमा पारिवारिक माहोल नै विगार्ने दृश्य (फोटो फिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भ्यालेन्टाइन डे- पार्कमा पारिवारिक माहोल नै विगार्ने दृश्य (फोटो फिचर)
काठमाडौँ। आज फेब्रुअरी १४ तारिख अर्थात भ्यालेन्टाइन डे । विश्वभर प्रेम र उपहार साटासाट गरेर यो दिवस मनाइएको छ । नेपालमा पनि भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रणय दिवस मनाउने प्रचलन बर्षेनी बढ्दो छ । किशोर किशोरी, युवा युवतीका लागि यो प्रेम चार्ड निकै चाखलाग्दो बन्दै गएको छ ।
प्रेमी प्रेमिकाले उपहार दिएर माया दर्शाउने र आफूलाई मन परेको व्यक्तिसामू प्रेम प्रस्ताव राख्ने दिनका रूपमा भ्यालेन्टाइन डे विश्वभर प्रचलनमा छ ।
राजधानी काठमाडौंमा प्रणय दिवसको फिभर व्यापक नै देखियो, खासगरी पार्कहरुमा । युवा युवतीहरुले पार्क, सिनेमा घर र रमणीय स्थलहरू भरिभराउ थिए ।
भृकुटीमण्डपस्थित एक पार्कमा युवा जोडीका प्रेमिल क्षण हेर्न लायक थियो । जहाँ जोडीहरु आ–आफ्नै धुनमा थिए । कोही पार्कभित्रै हात समाएर घुमिरहेका थिए त कोही चौरमा बसेर गफगाफ गर्दै थिए । तर पार्कमा केही जोडी भने खुल्लमखुल्ला चुम्बनमा लिप्त थिए । हाम्रो समाजले पचाउन नसक्ने आपत्तिजनक अवस्थामा पनि जोडी देखिए । पारिवारिक घुमघामका लागि पार्क पुगेकाहरूका लागि कतिपय जोडीका कृयाकलाप आपत्तिजनक थिए ।